Kooxda Man United Sidee Uga Mushahar Badatay Kooxaha Reer Yurub Sida Juventus, Bayern Munich, Atletico Madrid Iyo Barcelona? | Malcab.com Wararka Ciyaaraha
Kooxda Manchester United ayaa u muujisay awooddeeda dhaqaale tustay kooxaha adduunka ee ka cabanaya dhaqaale la’aanta uu sababay xanuunka Coronavirus dibna ugu laabtay ciyaartoygooda oo ay ka dhimayaan mushaharka.
Barcelona, Atletico Madrid iyo Juventus ayaa qaaday tallaabooyin ay ciyaartoygooda mushaharka ay qaataan hoos ugu dhigayaan, waxaana ugu daran Barcelona oo illaa 70% hoos u dhigaysa mushaharka, halka Juventus ay ciyaartoygeeda kula heshiisay in 20% laga dhimo.
Atletico Madrid ayaa inkasta oo ay ciyaartoyga qaarkood sheegeen inaan waxba lala socodsiinin la rumaysan yahay inay mushaharka xiddigaheeda hoos u dhigtay, sidaas oo kalena Bayern Munich, Borussia Dortmund iyo naadiyo kale ayaa si rasmi ah u shaaciyey mushaharka ay ka dhimeen ciyaartoygooda oo ah ilaa 20%.
Horyaalka Premier League, wali ma jirto koox shaacisay inay dhimayso mushaharka laacibiinteeda, hase yeeshee maamulka Premier League, EFL iyo PFA ayaa horraantii usbuucan ka wada hadlay sidii loo yarayn lahaa lacagta ciyaartoyda la siiyo si kooxaha aanay dhaqaale la’aan ugu dhicin.
Sidaasi oo ay tahay, Manchester United ayaa soo bandhigaysa cududdeeda dhaqaale, waxaanay si joogto ah u bixisaa gunnooyinka maalinlaha ah ee dadka sida yowmiyaha ah uga shaqayn jiray Old Trafford marka ay ciyaari ka jirto, kuwaas oo ay ka mid yihiin da’yarta kubbadaha soo qabqabata, ciidamada ammaanka iyo shaqaalaha kale ee maalintaas uun loo baahdo.
Sida uu qoray wargeyska Standard, Manchester United in si degdeg ah ay ugu dhaqaaqdo inay dhinto mushaharka ay siiso ciyaartoygeeda, waxaanay ku adkaysanaysaa inay leedahay awood dhaqaale oo ay isku bixin karto waqtigan, sidaas darteedna ay sidooda u fulinayso heshiisyada ay laacibiinteeda la gashay muddada ay ciyaaruhu hakadka ku jiraan oo lagu qiyaasayo ilaa saddex ama afar bilood.
Kooxda Manchester United waxa kale oo ay samaysay tallaabo kooxaha kale aanay ku dhiirranin oo ahayd inay si degdeg ah taageereyaasheeda ugu celisay lacag ka badan £245,000, taas oo ahayd lacagtii ay ku iibsadeen tigidhada kulankii LASK ee garoonka madhan lagu ciyaaray.
Shaqaalaha aan joogtada ahayn ee United ayaa mushaharka ay qaadan doonaan illaa dhamaadka xili ciyaareedka lagu sheegay £1 milyan oo ay sidooda u bixin doonto, sidoo kalena waxay malaayiin ku bixinaysaa gunnada iyo mushaharka xiddigaheeda.
Si kastaba ha ahaatee, halka ay kooxaha Barcelona, Atletico, Juventus, Munich, Dortmund iyo naadiyo kale oo badan oo adduunka ah markiiba u carareen inay mushahar dhimis sameeyaan, Manchester United waxay soo bandhigaysaa awood dhaqaale oo ah in aanay dib ugu noqonin shaqaalaheeda iyo ciyaartoygeeda oo ay iyadu madaxa u dhigato wixii khasaare ah ee yimaadda.
Fulham 0-3 Arsenal: Willian iyo Gabriel ayaa dhulka ku tuuray